Maamulka Gobolka Banaadir oo ka shiray Nadaafadda iyo arrimo kale “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Maamulka Gobolka Banaadir oo ka shiray Nadaafadda iyo arrimo kale “SAWIRRO”
Kulan isugu yimaadeen maamulka Gobolka Banaadir, isla markaana uu shir guddoominayay Guddomiyaha Gobalka ahna duqa Muqdisho Mudane Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab) ayaa looga hadlay dar dar gelinta ololaha nadaafadda ee gobolka, maadaama la guda galay xilli roobaad, ayna muhiitahay in bilic soo celinta caasimadda laga wada shaqeeyo.
Kulanka oo lagu qabtay xarunta Maamulka Gobolka Banaadir ee degmada Heliwaa, isla markaana ay ka qeyb galeen dhamaan Guddoomiyeyaasha Degmooyinka iyo xubno kale oo ka tirsan maamulka Gobolka ayaa diiradda lagu saaray wax ka qabashada meelaha ay biyaha roobku fadhiisteen, isla markaana la iska kaashado sidii arrimahaasi wax looga qaban lahaa.
Afhayeenka cusub ee maamulka Gobolka Banaadir ahna Agaasimaha Waaxda Warfaafinta Mudane Cabdifataax Cumar Xalane oo markii uu shirka soo idlaaday kaddib la hadlay Warbaahinta ayaa tilmaamay in ajandaha ugu weyn ee shirka looga hadlay ay tahay sidii looga shaqeyn lahaa bilic soo celinta caasimadda, maadaama la guda galay xilli roobaad, bulshada ay saameyn ku yeelaneyso roobka meelaha qaar biyo fadhiisadka ka sameystay.
Afhayeenku waxa uu xusay in shirka lagu soo hadal qaaday xoojinta amniga, iyadoo lala kaashanayo hay’adaha ammaanka oo xog la helaya shacabka Muqdisho ku nool, si looga hortago falalka ay maleegayaan maleeshiyada Al-Shabaab.
Maamulka Gobalka Banaadir ayaa wada qorshe lagu xoojinayo ololaha la xiriira dar dargelinta nadaafadda iyo bilic soo celinta Caasimadda.
Taliyaha Nabad Sugida Qaranka Oo Xalay Kormeeray Isgoysyada Magaalada Muqdisho